Soosaarayaasha otomatiga guryaha | Shiinaha Home Warshad & Qalabka
Nidaamka calaamadda albaabka dijitaalka ah
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee nidaamka calaamadaha albaabka dhijitaalka ah. Calaamadda albaabka dhijitaalka ah waxaa lagu dhejiyay banaanka albaabka aqalka ee jaranjarooyinka. Jaranjarada kaliya maahan mowduuc isdaba joog ah, laakiin calaamadeynta magacyada marka la guurayo ayaa sidoo kale si weyn loo fududeeyaa marka dhammaan magacyada si toos ah looga maamuli karo internetka.
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee nidaamka saldhigga albaabka. Annaga, at Pandawill, waxaan ku xeel-dheer nahay adeegyada wax soo saarka guryaha. Waad ku mahadsantahay warshadeena caqliga badan, injineeradayada iyo mashiinadayada waxay adeegsadaan falanqaynta xogta weyn, xisaabinta daruurta, sirdoonka farsamada (AI) iyo 3D-daabacaadda si loo abuuro aalado isku xiran oo loogu talagalay guriga casriga ah.
Laga soo bilaabo naqshadeynta iyo wax soo saarka guddiga PCB ilaa adeegyada NPI iyo xalalka dhamaadka nolosha ee wax soo saarka, warshaddeena caqliga badan waxay macaamiisheenna u keeni karaan xalal silsilad xeel dheer oo macaamiishooda ah.
Nidaamka xakamaynta muujinta LED
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee nidaamka xakamaynta muujinta LED. Annaga, at Pandawill, waxaan ku xeel-dheer nahay adeegyada wax soo saarka guryaha. Waad ku mahadsantahay warshadeena caqliga badan, injineeradayada iyo mashiinadayada waxay adeegsadaan falanqaynta xogta weyn, xisaabinta daruurta, sirdoonka farsamada (AI) iyo 3D-daabacaadda si loo abuuro aalado isku xiran oo loogu talagalay guriga casriga ah.